दिनेश गौतम काठमाडौं, ११ चैत
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएपछि र सोमबार नेपालमा पनि थप १ जना संक्रमित भेटिएपछि सरकारले ७ दिनलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ ।
विश्वमा कोरोना प्रकोपबाट १५ हजारको मृत्यु भएको छ भने लाखौँ बिरामी परेका छन् । त्यसैले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले घरबाट बाहिर ननिस्कन आदेश दिएको छ । लकडाउनसँगै मानिसमा डर र त्रास पनि उत्तिकै छ ।
सडक सुनसान छ । कार्यालयहरू बन्द छन् । मानिस घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी सावधानी अपनाउने ? कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ? कसरी आफू सुरक्षित रहने ? अनि हाम्रो दायित्त्व र कर्तव्य के हो ? यो समयमा के गर्ने के नगर्ने ?
यिनै विषयमा हामीले मनोविद् डा. गंगा पाठकसँग कुरा गरेका छौँ । डा. पाठकसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अहिले असहज परिस्थिति छ । यो असहज परिस्थितिलाई डटेर सामना गर्नुको विकल्प छैन । यो प्रकृतिबाट सिर्जना भएको परिस्थिति हो । सरकारले ल्याएको होइन । विचलित भएर, चिन्ता लिएर समाधान हुने विषय होइन । चिन्ताले झन् समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले सकारात्मक सोचको विकास गरौँ ।
मैले के गर्ने ? मेरो दायित्त्व के हो ?
यो सङ्कट कसैको हातमा छैन । त्यसैले आफूले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । मैले के गर्ने ? मेरो दायित्त्व के हो ? भन्ने आत्मबोध हरेकमा हुन जरुरी छ । हरेक व्यक्ति अनुशासित हुने हो भने सङ्कटलाई चिर्न सहज हुन्छ ।
पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य
आफ्नो व्यवसाय र काम गरेर खानेलाई गाह्रो छ । तर, काम र व्यवसायलाई लिएर चिन्ता गर्ने कि आफ्नो स्वास्थ्यलाई भन्ने हो । अहिले आफ्नो स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण हो । जिन्दगी रह्यो भने भोलि पनि गर्न सकिन्छ । काम र व्यवसायको भन्दा पनि शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भनेर सोच्ने समय हो ।
स्थिर भएर नबस्ने, ‘माइण्ड डाइभर्ट’ गर्ने
लकडाउनमा पनि घरमा बस्दा बढी चिन्ता लिने धेरै छन्, जसले मानसिक समस्या निम्त्याउँछ । एन्जाइटीको समस्या नहोला भन्न सकिन्न । जो भावनामा बहकिने स्वभावका हुन्छन्, त्यस्ता मान्छेलाई झन् बढी असर गर्छ । त्यसैले सोचेर बस्नुको सट्टा ‘माइण्ड डाइभर्ट’ गर्नुपर्छ ।
उत्पादनशील काम गर्ने, उत्पादनशील काममा मनलाई डाइभर्ट गर्नुपर्छ । स्थिर भएर बस्यो भने मन, मस्तिष्कमा नेगेटिभ विचार धेरै आउँछन् । त्यसैले चलायमान हुनुपर्छ ।
शरीरलाई मुभ गर्नुपर्छ । स्थिर भएर बस्यो भने आत्मबल घट्छ । घरमा बस्दा सानातिना भए पनि काम गरिरहनुपर्छ । यो समयमा उमेरअनुसार काम गर्ने हो । घर सरसफाइदेखि, किचेन, गमलासम्मको काम गर्न सकिन्छ ।
ध्यान, योग गरौँ
लाइफस्टाइललाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । एक्लो बस्दा एन्जाइटी हुन सक्छ । यसबाट जोगिन ध्यान, योग, साधना गर्‍यो भने पोजेटिभ भाव उत्पन्न हुन्छ । खालि बस्नुभन्दा डान्स गर्ने, जुम्बा गर्ने, सङ्गीत सुन्ने, किताब पढ्ने, पूजापाठ गरेर पनि समयमको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई विशेष ध्यान
ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई यस समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उमेर बढ्दै गएपछि स्ट्रेस हर्मन धेरै हुन्छ । साना कुरामा पनि धेरै चिन्ता लिने, आत्तिने हुन्छ । इम्यिुनिटी पावर पनि कमजोर हुन्छ । त्यस्तो मानिसलाई छिटो रोग लाग्न सक्ने भएकाले विशेष ध्यान र सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसको मतलब हृृृृृृृृृष्टपुष्टलाई नलाग्ने भन्ने होइन ।
बालबालिकाले कुरा बुझेका हुँदैनन् । किन लकडाउन गरेको ? घरभित्र किन बसेको ? भन्ने थाहा हुँदैन । यसको असर बालबालिकालाई पर्छ । अभिभावकले उनीहरूलाई सम्झाउन बुझाउन सक्नुपर्छ । अभिभावक डर र त्रासमा बस्नुहुँदैन ।
खानपान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । डर र त्रासलाई भुलाउन मद्यपान, धुमपान गर्ने पनि हुन्छन् । यो फेरि अर्को समस्या हो । यसले झन् रोग निम्त्याउँछ । त्यसैले कुलतबाट कसरी हुन्छ, जोगिनुपर्छ ।
जङ्क फुडबाट पनि टाढै बस्नुपर्छ । शरीरलाई चाहिने क्यालोरी, प्रोटिन कार्बोहाइड्रेटको मात्रा मिलाएर खानुपर्छ । गेडागुडी भिजाएर, सुप बनाएर नियमित खानुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ । ब्रेनमा अक्सिजन कम भयो भने छट्पटीी र चिन्ता धेरै हुन्छ । पानीमा अक्सिजन हुन्छ । त्यसैले पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ । घरमा बस्दा झ्याल, ढोका खुला राख्नुपर्छ ।
यो सङ्कटबाट जोगिन नेटेटिभ विचारबाट टाढै बसौँ । आफ्नो मात्र लोजिक नलगाऔँ । सबैको विचार बुझेर जानेर काम गर्ने र सावधानी अपनाउने हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ११, २०७६, ०२:२९:००